Last updated: Jul. 13 2019 | 2 Maminitsi verenga
zvechokwadi kuva nemhuka inovaraidza upenyu changed. Uye vose vaya vanoda hwechipfuwo kunze uko, tinoziva kuti unogona anoshandawo zvechokwadi chete pazasi chokwadi nomwe.
chokwadi #1: “Pet High”
Mhuka dzinovaraidza Kazhinji nechivimbo zvichiguma yakakwirira nokuzviremekedza. Pets rudo mirawo, kwazisa nomufaro, uye azadzise kudiwa yokubvuma, kusika munhu “bhabhadzira yakakwirira”, sezvo muridzi chipfuwo, munoziva kuti kunzwa hazvigoni vakarova.
chokwadi #2: More Positive Outlook Muupenyu
Kana kufunga kwako dzinovaraidza, imi hamugoni kubatsira asi kunyemwerera uye kufunga nzira dzose idzo vauya mufaro muupenyu hwako. Kunyange apo nguva dziri oma, nguva-refu kuvambundira uye mutambo purogiramu yakajeka zuva rako. Kutaura zvazviri, kana kufunga kwenyu dzinovaraidza, pfungwa isakarurama chinyararire uye positivity anoratidza kumarudzi muviri wako.
chokwadi #3: Lonely No More
Pets zvakare kutipa manzwiro Kuva uye atipe hune kuvapo. Mutoro chibayiro kunodiwa hwechipfuwo varidzi kunokosha zvose patinoona uye kunzwa kusiko, nonjudgmental nyaradzo zvavanokupai.
chokwadi #4: Ngaarambe achirindira Life uye Relationships
The “bhabhadzira yakakwirira” kuti kwedu dzinovaraidza tiratidzei anoita kuva pangozi kunyatsoti sezvo kutyisa. Nokuti tinoziva kuti pasinei chinoitika, pane chipenyu uvimbe pedu. kuburikidza dzinovaraidza’ hanya hunhu uye rudo, wechokwadi kuyanzva dzinovaraidza anotiratidza rinopa tariro kuti kuzarura zvechokwadi unokosha ngozi dzose nguva.
chokwadi #5: Kutenda Soul Nomudzimai
Kuburikidza anongoitika kutsvoda kuti pamakumbo-akagara kuti Zvinoonekwa kushamiswa mumaziso avo, ari Unconditional dzinovaraidza zvinopa anopa matswa neshoko mweya naye. Nekuti vadikani dzinovaraidza uye enthusiasts, yedu dzinovaraidza tiri mumwe mweya yedu vakaroorana. By pavo “kungoziva” apo tinoda mamwe pfungwa inosimbisa kuti mweya yenyu kutaura kune mumwe. Hazvina pfungwa iyi kuti kwedu dzinovaraidza tive asununguke uye dzazvinogara Nezvepfungwa iyi mweya mates.
chokwadi #6: In Touch pamwe Manzwiro
By manzwiro, kuti hazvirevi hysterical kuchema kana kugara Zvinyamusi. Pets kupa upenyu hwedu kwakadzama zvinorehwa nokubvumira kuwana nekuonana naye manyoro, zvikuru dyidzana manzwiro. isu, sezvo mhuka dzinovaraidza, ndivo yemanyorero nechido uye vanogona kuratidza pachena pfungwa dzedu uye manzwiro kwete zvedu dzinovaraidza asi kune vamwe uyewo.
chokwadi #7: Pets Uya First
Our dzinovaraidza muri vana vedu. Kubva kuramba kutaura nezvavo kukuponeswa zviuru hwechipfuwo mifananidzo kuti vachivabata sezvo vacheche, ukama pakati pedu uye dzedu mhuka dzinovaraidza chaizvo akafanana mubereki mwana.